घर फोटो मा डिस्को गर्न Hairstyles
जीवन नीरस र monotonous खैरो दिन भरिएको छ भने, एक व्यक्ति बस बाहिर ऊर्जा र प्रेरणा चल्छ। त्यसैले यो एक राम्रो बाँकी, विद्यालय वा काम बारे भूल साप्ताहअन्त अगाडी महत्त्वपूर्ण छ। साथै, एक केटी ऊर्जावान छ र सोफा वा ओछ्यानमा झूट सारा सप्ताह खर्च गर्न सहन सक्दैन भने, यो एक डिस्को के केश बनाउन विचार लायक छ। एक हल्ला पार्टी मा बस सक्दैन जो बिना, केश, मेकअप देखि, लुगा र स्टाइलिश सामान गर्न: पहिल्यै तपाईं छवि विवरण विचार गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा आकस्मिक स्टाइल पनि साधारण हेर्न थियो।
घरमा Hairstyles - यो सजिलो छ!
एक डिस्को गर्न Hairstyles शैली र घटनाको सेटिङ र विषय अनुरूप को विचार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। बाल पहिलो नजर मा यो कठिन देख्यो कि, विकेन्द्रहरु दिनुपर्छ, तर वास्तवमा धेरै समय लाग्न थिएन।
घरमा एउटा सुन्दर hairdo सिर्जना गर्न, तपाईं निम्न सामान आवश्यक:
elastics र barrettes;
तपाईं एक डिस्को मा एक नियुक्ति सिर्जना गर्दा मुख्य कुरा हो - हामी हाम फाल्न र संगीत को बिट सार्न कि आवश्यकता विचार र त्यसपछि किसिमहरु आकार मा लगभग जस्ताको तस्तै अन्तिम कर्ड सम्म राख्न आवश्यक छ। अब मा फैशन Hairstyles मा भव्य शैली। मास्टर स्टाइलिस्ट केश सजाने सिफारिस:
नियन मोती र सेक्विन।
उनको कपाल जस्तै सिफारिसहरू सन्दर्भमा गरेको छ भने, तपाईं रोमान्स को एक स्पर्श एउटा हल्का स्त्री नजर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। नृत्य भुइँमा उज्यालो हुन, झिल्काहरु संग पर्याप्त पैकिंग लाह संग छिडकना र रोशनी सबै सूचना सशक्त र स्टाइलिश थाकबनाउदै। चाखलाग्दो कुरा, घर मा डिस्को गर्न Hairstyles धेरै समय लाग्न गर्दैन। पनि एक सरल "ponytail", घटनाको विषय अनुरूप हुनेछ।
कसरी पाँच मिनेट मा डिस्को गर्न कपाल बनाउने?
लगभग हरेक केटी धेरै समय स्ट्याकिङ लागि नयाँ विचार फेला पार्न प्रयास व्यतित छ, र त्यसपछि वास्तविकता मा विचार कसरी अनुवाद गर्न बाहिर आंकडा। एक सना भ्रमण बिना एक डिस्को (सामाग्री मा प्रतिनिधित्व तिनीहरूलाई को फोटो) गर्न Hairstyles घरमा गर्न सकिन्छ। कहिले काँही, शुल्क मा परिस्थितिअनुसार समयमा एक बिट छ, त्यसैले बाल, जो पाँच मिनेट लाग्छ कार्यान्वयन मा, धेरै सान्दर्भिक छ।
बाल स्टाइल को लम्बाइ आधारमा गरिन्छ। केश supershort, तपाईं एक केश बनाउन सक्छ भने पनि, तपाईं एक मोडेलिंग जेल र फोम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लामो र धेरै बाल स्टाइल विकल्प एक ठूलो सेट प्रस्ताव राखे। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - को डिस्को केश गर्न स्वाभाविक देख्यो र सुरक्षित फिट छ।
लामो कपाल लागि Hairstyles
लामो कपाल मा उनको कपाल को शैली मा गर्न सकिन्छ Nikol Richi। डिस्को एक व्यावहारिक र स्टाइलिश विकल्प छ। को बिछाउने गर्न फलाम र हेयर क्लिप बाल आवश्यक छ। आफ्नो बाल माझ्छु, त्यसपछि दुई भागमा विभाजन र किसिमहरु सीधा, सुरु गर्न। मुकुट मा बाल अलग र एक क्लिप संग सुरक्षित। को किसिमहरु अस्थायी पक्ष मा स्थित हो, र सङ्कलन र Clamps संग सुरक्षित। एक ponytail मा बाल सुरक्षित बाँकी, को गम वरिपरि अस्थायी obkrutite, माथिल्लो Strand गोली गर्नेछु, र अधिक comb। को डिस्को केश यो संस्करण यो तरिका मा केटी स्त्री र फैशन देखिन्छ अन्त मा बाल, फिक्स।
मध्यम लम्बाइ बाल लागि Hairstyles
प्रकृति द्वारा मध्यम लम्बाइ, घुम्रेको को दल र discos बाल लागि, जेल प्रयोग modeled। यो गर्न, आफ्नो हात मा हालतमा राख्नु र बिस्तारै अलिकति disheveled उपस्थिति प्राप्त गर्न बाल धक्का। घर मा डिस्को यस्तो Hairstyles पाँच भन्दा कम मिनेट पनि लिन र स्त्रीत्व र रोमान्स को छवि दिनुहोस्। स्टाइलिस्ट उनको कपाल संग डिस्को जा सिफारिस छैन। को अस्थायी क्षेत्रबाट बाल लिन र सुरुचिपूर्ण शैली, "Malvina" मा बीम जडान गर्नुहोस्। कि गाढा मा चमक र सबैको ध्यान आकर्षित हुनेछ नियन मोती संग सुरक्षित पिन केश।
छोटो कपाल लागि Hairstyles
एक डिस्को गर्न Hairstyles छोटो कपाल स्टाइल लागि विकल्प को एक विस्तृत विविधता छ। सजिलो - यो मोडेलिंग जेल को मद्दतले भद्रगोल बनाउन सजिलो छ। यो गर्न, एजेन्ट फिक्सिंग को एक भिजेको किसिमहरु लागू र सुक्खा झटका, र विभिन्न दिशामा खींच को अन्त्य मोम। यदि घुम्रेको कपाल, पर्याप्त बाल समाधान, तपाईं चमक संग रंग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, कर्लिंग फलाम विपरीत दिशा मा धमाका मोड र स्वाभाविक नृत्य तल्ला हेर्न गर्ने एक उत्तेजक केटी मा रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ। छवि थप्न, तपाईं रिम गर्न सक्छन्।
मूल र स्टाइलिश सैलुन आवश्यक छैन एक घण्टा वा बढी खर्च गर्न छ, केही बस पाँच मिनेट खर्च गर्न पर्याप्त बिछाउने। एक डिस्को गर्न स्त्री र रचनात्मक तरिका छैन जरूरी सना सिर्जना छ। इच्छा र लगनशील भई लागिरहेमा को एक सानो बिट - र प्याक घरमा सजिलै गर्न सकिन्छ।
घरमा बाल Toning। साधन समीक्षा सुझावहरूको
शानदार गोरा: कूल फेसनदार छाया
"Estelle" - बाल रंग: समीक्षा, गुणस्तर
यो श्रृंखला "Interns" गोली कहाँ र कसरी? "Interns": protagonists, अभिनेता
कसैले ब्रह्माण्ड के हो थाहा छ?
कसरी घर मा5किलो द्वारा 10 दिनमा वजन गर्न? समीक्षा
कालो भाषा: कारणहरू, उपचार
पाक लागि चरण निर्देशनहरूको द्वारा कस्टर्ड pirozhen, साथै चरण लागि नुस्खा